Nivoaka tamin’ny fahanginany mikasika ny tsy fanarahan-dalàna momba ny fandravana ilay trano tetsy Ambohijatovo avaratra ireo mpanolon-tsaina mpanohitra eo anivon’ny CUA ny sabotsy teo. Nilaza izy ireo fa maro loatra ny tsy fanarahana ireo dingana tokony arahina mikasika ny fandravana trano tamin’ity raharaha ity. Nomarihin’izy ireo ihany koa fa tanin’olon-tsotra, voaporofo, amin’ny maha an’olon-tsotra io tany io dia azo atao tsara ny mampanara-dalàna izany fanatsarana trano izany fa tsy tokony hiroso amin’ny fandravana avy hatrany. Mbola mandeha eny amin’ny fitsarana io raharaha io amin’izao fotoana izao ka andrasana izay fanapahan- kevitry ny fitsarana ambony.
Sinoa maty tao amin’ny hotely
Sinoa iray antsoina hoe Jiang Shao Wei, voatondro ho namono nahafaty ireo mpivady tao amin’ny hotely Paon d’Or ny faran’ny herinandro teo, no namohanan’ny fitsarana didy fampisamborana. Araka ny fantatra dia antsy sy maritoa no namonoana tamin’ny fomba feno habibiana azy mivady ireto tao amin’ny hefitrano fidiovana tamin’izany. Raha ny vaovao voaray farany, dia ny fiara 4×4 azy mivady ireto no efa hita amin’izao fotoana izao fa ilay voatondro ho namono azy ireo kosa mbola tsy hita. Manao antso araka izany ny mpitandro filaminana amin’izay olona manana vaovao mikasika io teratany sinoa karohina fatratra io.
Ny sabotsy lasa teo no nanaovana ny lanonana famoahana tamin’ny fomba ofisialy ireo andiany faha-72 nivoaka tao amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena tany Ambositra. Miisa 1185 ireto zandary vao ireto izay nisalotra ny anarana andiany « Fivoarana ». Naharitra 13 volana ny fanofanan’ ireto mpianatra vao nivoaka ireto tamin’izany. Tonga tany an-toerana namoaka azy ireo ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, Paza Didier, sy ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena.